ဥပဒေ သစ်တွေထုတ်လိုက်ပြီနော် ဆိုင်က ယ်မောင်းနှင်သူများသိရှိစေဖို့ အထူးအရေးကြီး – Zartiman
Zar Ti Man | June 27, 2020 | Knowledge | No Comments
ဥပဒေ သစ်တွေထုတ်လိုက်ပြီနော် ဆိုင်က ယ်စီးမောင်းနှင်သူများသိရှိေ စရန် (2020-ဥပေ ဒသစ်)အထူးအရေးကြီးလို့ ဖော်ပြလိုက်တာ ပါ။ပြီးမှ မသိလိုက်လို့ ဆိုပြီး မရှုနိုင်မကယ်နိုင် ဖြစ်နေ ကြမယ်။သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး မှတ်သားထားကြဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သိထား တော့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် နားလည်ထားတာပေါ့။ စေတနာဖြင့် အသိပေး၏။
ဘက်မှန်မပါ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ရှေ့မီးအနိမ့်နေ့/ညဖွင့်မောင်းရန်ပျက်ကွက် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ခ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း။ ပါဝါအိတ်ဇောအသံထိန်းမပါ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ (၇၆- က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။
ဦးထုပ်မဆောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇= ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း။တို့ဖြစ်သည်။ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူး လွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ။
ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်= ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ။ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ = ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။ ယဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ (၈၁-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ = ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။
တခြားသူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သုံး = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁။ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။ ယာဉ်မ ဆင်မခြင်မောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-င)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ = ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးအရက် အမူးလွန်းမောင်း ပုဒ်မ(၈၁-ဇ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ = ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။
ယဉ်မောင်းလိုင်စင်မပါ ပုဒ်မ(၇၅-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ ယဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းလွန် = ကျုးလွန် သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ- ၈၆ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ မီးပိုတပ် = ကျုးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဆ)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ယာဉ်မောင်းစဉ်ဖုန်းအသုံးပြု = ကျုးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဋ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်-၈၆ = ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း။
ဥပဒေ သဈတှထေုတျလိုကျပွီနျော ဆိုငျက ယျမောငျးနှငျသူမြားသိရှိစဖေို့ အထူးအရေးကွီး
ဥပဒေ သဈတှထေုတျလိုကျပွီနျော ဆိုငျက ယျစီးမောငျးနှငျသူမြားသိရှိေ စရနျ (2020-ဥပေ ဒသဈ)အထူးအရေးကွီးလို့ ဖျောပွလိုကျတာ ပါ။ပွီးမှ မသိလိုကျလို့ ဆိုပွီး မရှုနိုငျမကယျနိုငျ ဖွဈနေ ကွမယျ။သသေခြောခြာ ဖတျပွီး မှတျသားထားကွဖို့ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ သိထား တော့ ဆောငျရနျရှောငျရနျ နားလညျထားတာပေါ့။ စတေနာဖွငျ့ အသိပေး၏။
ဘကျမှနျမပါ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-က)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇ = ဒဏျငှေ သုံးသောငျး။ရှမေီ့းအနိမျ့နေ့/ညဖှငျ့မောငျးရနျပကျြကှကျ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-ခ)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇ = ဒဏျငှသေုံးသောငျး။ ပါဝါအိတျဇောအသံထိနျးမပါ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ (၇၆- က)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇ = ဒဏျငှေ သုံးသောငျး။
ဦးထုပျမဆောငျး =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၆-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၈၇= ဒဏျငှသေုံးသောငျး။တို့ဖွဈသညျ။ယာဉျနံပါတျမထငျရှား = ကြူး လှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၄-က)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၄ = ဒဏျငှသေုံးသိနျး. ထောငျ သုံးလ။ အခွားနံပါတျတပျ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၄ = ဒဏျငှေ သုံးသိနျး.ထောငျသုံးလ။
ယာဉျနံပါတျပွားမတပျ= ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၄ = ဒဏျငှသေုံးသိနျး. ထောငျ သုံးလ။ဝှီးတကျသကျတမျးကုနျ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၀)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၁ = ဒဏျငှတေဈသိနျး. ထောငျ တဈလ။ ယဉျမောငျးလိုငျစငျမရှိ = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ (၈၁-က)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၁ = ဒဏျငှတေဈသိနျး. ထောငျ တဈလ။
တခွားသူ၏ယာဉျမောငျးလိုငျစငျသုံး = ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၉၁။ဒဏျငှတေဈသိနျး. ထောငျ တဈလ။ ယာဉျမ ဆငျမခွငျမောငျး =ကြူးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၈၁-င)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၉၁ = ဒဏျငှေ တဈသိနျး. ထောငျ တဈလ။ မူးယဈဆေးဝါးသုံးအရကျ အမူးလှနျးမောငျး ပုဒျမ(၈၁-ဇ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ ၉၁ = ဒဏျငှေ တဈသိနျး. ထောငျ တဈလ။
ယဉျမောငျးလိုငျစငျမပါ ပုဒျမ(၇၅-က)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၈၆ = ဒဏျငှေ သုံးသောငျး။ ယဉျမောငျးလိုငျစငျသကျတမျးလှနျ = ကြုးလှနျ သညျ့ပုဒျမ(၇၅-ဂ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျမ- ၈၆ = ဒဏျငှေ သုံးသောငျး။ မီးပိုတပျ = ကြုးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၅-ဆ)။အရေးယူသညျ့ပုဒျမ-၈၆ = ဒဏျငှေ သုံးသောငျး။ယာဉျမောငျးစဉျဖုနျးအသုံးပွု = ကြုးလှနျသညျ့ပုဒျမ(၇၅-ဋ)။ အရေးယူသညျ့ပုဒျ-၈၆ = ဒဏျငှသေုံးသောငျး။
အိုးပိုင်အိမ် နေစရာအခန်းမရှိသူများ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းပေးရတဲ့အထိ အစွမ်းထက်တဲ့ ဂါထာတော်ကြီး